တရုတ်နိုင်ငံ အမျိုးသား ရေဘေးအန္တရာယ် နှင့်မိုးခေါင်ရေရှားခြင်း ကယ်ဆယ်ရေးဌာနက ရေဘေးကာကွယ်ရေး စတုတ္ထအဆင့် အရေးပေါ်ဆောင်ရွက်မှုစတင် - Xinhua News Agency
ပေကျင်း ၊ ဇွန် ၂၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ၌ လတ်တလောရက်ပိုင်းအတွင်း မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့် ဟေလုံမြစ်အထက်ပိုင်း ၊ နိမ်မြစ်အထက်ပိုင်း နှင့် အချို့သော မြစ်ခွဲများတွင် စိုးရိမ်ရေအမှတ်ကျော်လွန်သည့် ရေကြီးမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အချို့သော မြစ်ပိုင်းများတွင် လုံခြုံမှုအာမခံချက်ရှိသည့် ရေမှတ်ထက်ကျော်လွန်သည့် ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန က ဇွန် ၂၁ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ဇွန် ၂၁ ရက် ၁၄ နာရီအချိန်တွင် နိမ်မြစ် Nierji ဆည်၏ ရေစီးဝင်မှုသည် တစ်စက္ကန့်လျှင် ၄,၁၆၀ ကုဗမီတာ အထိ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ၎င်းမြစ်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်က အမှတ်စဉ်(၁) ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိချိန်၌ ရေကြီးရေလျှံမှု ကာကွယ်ရေးအခြေအနေအရ တရုတ်နိုင်ငံ အမျိုးသား ရေဘေးအန္တရာယ် နှင့်မိုးခေါင်ရေရှားခြင်းကယ်ဆယ်ရေးဌာနချုပ်ရုံး က ဇွန် ၂၁ ရက် ၁၃ နာရီ၌ ရေဘေးကာကွယ်ရေး စတုတ္ထအဆင့် အရေးပေါ်ဆောင်ရွက်မှုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ကွေ့ကျိုးပြည်နယ်တွင် မေ ၂၇ ရက်၌ ရေဘေးကာကွယ်ရေးလေ့ကျင့်မှု အဖြစ် ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း လေ့ကျင့်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အမျိုးသား ရေဘေးအန္တရာယ် နှင့်မိုးခေါင်ရေရှားခြင်းကယ်ဆယ်ရေးဌာနချုပ်ရုံး က သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ် နှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများ ၏ ကာကွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဌာနများအား အချိန်မီ ဆောင်ရွက်မှုများ နှင့် အရေးပေါ်ချိန်ညှိတုံ့ပြန်မှုများကို ပြုလုပ်သွားရန် ၊ ကြီးကြပ်တိုင်းတာမှု ၊ ကြိုတင်သတင်းပေးမှု ၊ ကြိုတင်သတိပေးမှု နှင့် ဆွေးနွေးသုံးသပ်မှုများအား တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားရန် ၊ မြစ်ချောင်းများ၏ သတိပေးရေအမှတ် နှင့် လုံခြုံမှုအာမခံချက်ရှိသည့် ရေအမှတ် ကျော်လွန်သည့် မြစ်ပိုင်းများ ကင်းလှည့်စစ်ဆေးမှုနှင့် ကာကွယ်မှုများဆောင်ရွက်သွားရန် ၊ ဆည်များ၏ လုံခြုံမှုရေအမှတ်ကျော်လွန်သည့် ရေကြီးမှုများအား လက်တွေ့ကောင်းမွန်စွာ ကိုင်သွယ်ဆောင်ရွက်သွားရန် ၊ အလယ်အလတ် နှင့် သေးငယ်သည့် မြစ်ချောင်းများ၏ ရေဘေးကာကွယ်ရေး နှင့် မြေပိုမှုသဘာဝဘေးကာကွယ်မှုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သွားရန် တောင်းဆိုခဲ့ပြီး အန္တရာယ်ဖြစ်ပွားနိုင်သည့် ဒေသတွင်တည်ရှိနေသော ပြည်သူများအား ကြိုတင်ရွေ့ပြောင်းပေး၍ ပြည်သူလူထုတို့၏ အသက်လုံခြုံရေးကို အာမခံချက်ရှိအောင် ဆောင်ရွက်ကာ သဘာဝဘေးကြောင့်ဖြစ်ပွားသည့် ဆုံးရှုံးမှုအား အတိုင်းအတားအကြီးမားဆုံး လျှော့ချနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ကြရန် ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ကွေ့ကျိုးပြည်နယ်တွင် မေ ၂၇ ရက်၌ ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များက သဘာဝဘေးကာကွယ်ရေးတွင် အသုံးပြုသည့် ကိရိယာများ အသုံးပြုပုံကို လေ့လာနေကြစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ဟူနန်ပြည်နယ်တွင် မေ ၂၇ ရက်၌ ရေကြီးရေလျှံမှု ကာကွယ်ရေး လေ့ကျင့်မှု အတွင်း ရေထဲပြုတ်ကျသွားသူအား ကယ်ဆယ်သည့် လေ့ကျင့်ခန်း ဆောင်ရွက်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
လက်ရှိချိန်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ အမျိုးသား ရေဘေးအန္တရာယ် နှင့်မိုးခေါင်ရေရှားခြင်းကယ်ဆယ်ရေးဌာနချုပ်ရုံး ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့က ဟေလုံကျန်းပြည်နယ်တွင် ရေကြီးမှုကာကွယ်ရေး နှင့် ရေကြီးရေလျှံမှုပပျောက်ရေး သဘာဝဘေးကယ်ဆယ်မှုလုပ်ငန်းများအား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်း သိရှိရသည်။ (Xinhua)
1. 5月27日，江苏丰县军地联合防汛抗洪救援应急实战演练在大沙河畔举行，基干民兵进行“排水抢险”。新华社发（高荣光 摄）
2. 5月27日，贵州省榕江县水上救援应急队员在柳江进行水上救援演练，备战防汛抗洪。新华社发（杨成利 摄）
3. 5月27日，贵州省榕江县水上救援应急队员在学习冲锋舟动力设备的操作技术，备战防汛抗洪。新华社发（杨成利 摄）
4. 5月27日，武警衡阳支队在湖南省衡阳市雁峰区南湖公园开展水域救援集训暨抗洪抢险实战演练，支队战士在救助“落水”群众。 新华社发（曹正平 摄）